कञ्चनले पढाउने विद्यार्थी रुदै पुगे समबेदना दिन! भावुक बन्यो माहाैल… मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो सहित) – Gazabkonews
कञ्चनले पढाउने विद्यार्थी रुदै पुगे समबेदना दिन! भावुक बन्यो माहाैल… मन थामेर हेर्नुहोला (भिडियो सहित)
काठमाडौँ। जिल्लाको कपन स्थित चुनिखेलमा पौष १९ अनिसा कुमाल र कन्चन तिमल्सिनाले बिबाह गरेका थिए तर केटीको माइती पक्षको कारण कन्चनले बि ष से व न गरेका छन । केटिले सिन्दुर लाउन हतार लाएपछि दुबै जनाले घरमै सिन्दुर हालेर बिबाह गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा दुई महिना देखि कञ्चन र अनिषाको बारेमा निकै चर्चा भएको छ । दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् । आइतवार उनको निधन भएको छ ।
लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहेजस्तो सुधार आउन सकेको थिएन । तर पनि चिकित्सकले उनलाई निकै बचाउने प्रयास गरेका थिए । धेरै दिनको बे होसी अवस्थावाट उनी उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए । तर पछिल्लो समय उनलाई फेरी निमोनिया भएको कारण अवस्था विग्रिएको हो । उनको हात खुट्टा समेत चल्न बन्द भएका थिए । यसैले थेरापी पनि सुरु गरिएको थियो ।
काठमाडौवाट गएका विशेषज्ञ टोलीले उनको उपचार गरेको थियो । आफुले माया गरेको मानिसलाई पाउन नसक्दा कञ्चनले आफैलाई स जा य दिएका थिए । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन । सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले विवाह त गरे तर त्यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन ।
चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दवावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो ।